10ka Qoraa ee ugu Wanaagsan WordPress Box Plugins | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/10ka Qoraa ee ugu Wanaagsan WordPress Box Plugins
10ka Qoraa ee ugu Wanaagsan WordPress Box Plugins
Hal sifo oo caadi ah laakiin inta badan la iska indho tiray oo ku taal bogag badan oo WordPress ah ayaa ah sanduuqa noolaha ee qoraaga. Caadi ahaan waxaa laga helaa dhammaadka boostada blog-ka, sanduuqa qoraagu waxa uu kordhiyaa rabitaanka, markaa kalsoonida iyo sharcinimada mareegahaaga.
Akhristayaashaadu waxay wax badan ka ogaan karaan adiga ama qorayaashaada markay jalleecaan. Ka sokow, waxaad kori kartaa saamayntaada warbaahinta bulshada oo aad muujin kartaa caddaynta bulshada adiga oo ku dara xiriirinta akoonnadaada sanduuqa qoraaga. Oo kuwanu waa laba kiis oo keliya oo la isticmaalo.
Si kale haddii loo dhigo, sanduuqa noolaha ee qoraaga, sida sanduuqa faallooyinka, waa hab kale oo cajiib ah oo ka qayb galka booqdayaashaada. Taasi waa sababta ay u murugo badan tahay dad badan ayaa dayacay sanduuqa qoraaga, si ka sii badan marka aan haysano sanduuqyo badan oo qoraaga WordPress ah si ay shaqada uga dhigaan mid aad u fudud.
Boostada maanta, waxaan ku dabooleynaa sanduuqa qoraaga ee bilaashka ah iyo kan qiimaha leh ee WordPress. Waxaan rajeyneynaa inaad hesho xalka ugu fiican baahiyahaaga gaarka ah. Fadlan la wadaag sanduuqa qoraaga WordPress ee aad jeceshahay faallooyinka.
Anagoon ka sheekayn, aynu shaqada u dhaadhacno.
Haddi aad doorato sanduuqa qoraaga bilaashka ah ama premium, plugins-yada aad halkan ka hesho ayaa shaqaysta. Doorashadaadu, sidaas darteed, waxay hoos ugu dhigi doontaa doorbidkaaga shakhsi ahaaneed iyo baahiyaha gaarka ah. Sidoo kale, xasuuso inaad ku tijaabiso sanduuqa qoraaga aaladaha mobilada si aad u hubiso in wax waliba ay u muuqdaan kuwo wanaagsan oo ay si habsami leh u shaqaynayaan.
Taas marka la yiraahdo, aan eegno sanduuqa qoraaga WordPress ee ugu fiican.
1. Sanduuqa Qoraaga Fudud
Marka hore safka waxaa ku jira Sanduuqa Qoraaga Fudud, aad u fudud oo fudud in la isticmaalo sanduuqa qoraaga WordPress ee WebFactory Ltd. Pluginku wuxuu ku darayaa sanduuqa qoraaga jawaabta dhamaadka qoraaladaada. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad muujiso magaca qoraaga, avatar, sharaxaad, iyo muuqaalada warbaahinta bulshada.
Waxaad si buuxda u habayn kartaa qaababka plugin si aad u waafajiso mawduucaaga muuqaal quruxsan oo lebbisan. Sanduuqa Qoraaga Fudud wuxuu si toos ah u geliyaa sanduuqa qoraaga qoraalladaada. Haddii kale, waxaad ku dari kartaa sanduuqa qoraaga si gacanta ah faylashaada template. Waxay taageertaa RTL iyo AMP.
2. Qoraaga ugu dambeeya ee Box Lite
Ultimate Author Box Lite waa plugin cajiib ah oo kuu ogolaanaya inaad ku darto faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qorayaashaada, ama si toos ah ama isticmaalaya koodka gaaban. Waxay taageertaa qoraalada, boggaga, iyo noocyada boostada gaarka ah, iyada oo ku siinaysa xulasho balaadhan ilaa inta ay muujinayso sanduuqyada qoraaga.
Si aad u bilawdo, waxaad haysataa shan qaab oo si qurux badan loo qaabeeyey. Xakameyn dheeri ah, waxaad haysataa midabyo gaar ah oo aan xadidnayn oo aad gacanta ku hayso. Intaa waxaa dheer, waxaad tusi kartaa avatars-ka qoraaga ee Facebook, Twitter, Instagram, ama isticmaal sawirro gaar ah. Intaa waxaa dheer, waxaad dooran kartaa inaad ku muujiso sanduuqa qoraaga qoraallo gaar ah ama bogag. Toban astaamood oo bulsheed iyo astaamo badan ayaa xidhay heshiiska.
3. Ugu dambeyntii qoraaga Box Pro
Sanduuqa qoraaga ugu dambeeya waa nooca lacagta la bixiyo ee ugu dambayntii Author Box Lite plugin aan hore u soo sheegnay. Plugin waa la cusboonaysiiyay dhawaan, isaga oo ku daray sifooyin badan plugin qoraaga WordPress oo hore u xoog badnaa. Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu muujin karo loogana mahadcelinayo qorayaasha boggaaga WordPress.
Waad ku mahadsan tahay xulashooyinka ugu wanaagsan sida tab qoraalada ugu dambeeyay, tabsyada warbaahinta bulshada, calaamadaha, avatars, profiles, iimaylo, taleefan, iyo magacyada qoraaga, waxba kama diidayo qorayaashaada inay iftiimaan. Plugin ayaa dhawaan la cusboonaysiiyay iyada oo leh astaamo aad u awood badan, marka waxaad filan kartaa inaad waqti fiican ku qaadato Sanduuqa Qoraaga Ultimate.
4. (Si fudud) Magaca qoraaga martida
Haddii aad la shaqeyso qoraallo badan oo marti ah, waxaad ka heli doontaa plugin Magaca qoraaga Martida mid faa'iido leh. Marka qorayaasha martida ay soo gudbiyaan qoraallada, badanaa dib ayaa loo eegaa ilaa aad doorato inaad daabacdo. Waxaad isticmaali kartaa koontada qoraaga martida, laakiin marka aad leedahay wax ku biiriyaal badan, waxay noqon kartaa mid daal badan.
Laakiin mahadsanid plugin kor ku xusan, waxaad si deg deg ah ku dari kartaa qoraaga martida in boostada iyo link in ay blog in gujinaya. Uma baahnid inaad ka walwasho sida sanduuqa qoraagu ugu muuqdo akhristayaasha; si fudud ku dar magaca qoraaga martida oo ku xidhidhiyo aad rabto, waana taas. Haddii aad u janjeerto, waxaad xitaa ku dari kartaa avatar qoraaga si fudud.
5. Starbox - Sanduuqa Qoraaga ee Aadanaha
Ma waxaad raadinaysaa inaad abuurto sanduuqyo noole oo qurux badan oo ka dhaadhiciya akhristayaasha inay dhex maraan oo ay wax badan ka akhriyaan adiga ama qorayaashaada? Hadday sidaas tahay, waxaad jeclaan doontaa Starbox by guys weyn ee jooga Squirrly UK. Plugin-ku wuxuu la socdaa astaamo wanaagsan si loo abuuro sanduuqyo qoraa oo qurux badan oo shaqeeya.
Si aad si dhakhso leh ugu kiciso oo aad u socoto, Starbox waxay la socotaa mawduucyo horay loo sii sameeyay oo abuurista qoraaga ka dhigaya dabayl. Intaa waxaa dheer, waxaad dhigi kartaa sanduuqa qoraaga xagga sare ama hoose ee qoraalladaada. Intaa waxaa dheer, plugin-ku wuxuu la socdaa profiles bulsheed, Google & Facebook qoraan, qaybo qani ah oo loogu talagalay natiijooyinka raadinta Google, xiriirinta qoraallada qoraaga, magaca shaqada qoraaga, iyo wax ka badan.
6. Liiska Qoraaga WordPress ee Fancy
Haddii aad raadinayso wax ka badan sanduuqa qoraaga, A Fancy WordPress Qoraaga Liiska Qoraaga plugin waxa uu ku siinayaa xal cusub. Plugin-ku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku muujiso liiska qorayaashaada shabakad qurux badan oo akhristayaasha ay si fudud u heli karaan. Laakiin taasi maahan, plugin-ku wuxuu la socdaa astaamo kale oo badan.
Waxaad si fudud ugu soo bandhigi kartaa liiska qorayaasha dhinaca bar-side, bogga, ama aag kasta oo kale oo widget ah. Plugin-ku wuxuu kor u qaadaa tartanka caafimaadka qaba ee u dhexeeya qorayaasha, taas oo macnaheedu yahay waxyaabo aad u fiican bloggaaga. Dheeraad ah, waxaad gali kartaa sawirro gaar ah, astaanta warbaahinta bulshada, waxaadna ku dari kartaa saameyn firfircoon si aad u soo jiidato booqdayaasha cusub.
7. Qoraaga Bio Box
Qoraaga Bio Box waa sanduuqa sanduuqa qoraaga ee WordPress fudud kaas oo bixiya feerka. Waxay kaa caawinaysaa inaad si fudud ugu darto bios-ka qoraaga, avatars, iyo astaanta warbaahinta bulshada. Iyada oo tiro badan oo astaamo ah, abuurista sanduuqa bio avatar qurux badan waligeed ma fududayn.
Sanduuqa qoraaga Bio wuxuu la socdaa is-dhexgal maamul oo si sahlan loo isticmaali karo kaas oo ka dhigaya abuurista sanduuqyada qoraaga ugu fiican ee goobtaada si toos ah. Waad ku mahadsan tahay goobaha ku filan, waxaad ka bedeli kartaa wax kasta midabada, halka sanduuqyada qoraaga lagu muujiyay, iyo wax ka badan.
8. Qoraaga WP Post
Haddii aad suuqa ugu jirto sanduuqa sanduuqa qoraaga WordPress ee dhinacyo badan leh, kuma khaldami kartid qoraaga WP Post. Maskaxda u leh Mawduucyada AF, Qoraaga WP Post waxa uu ku siinayaa doorashooyin kala duwan, oo ay ku jiraan qoraaga noolaha, astaanta bulshada, koodka gaaban, iyo wixii la mid ah.
Si kale haddii loo dhigo, plugin-ku wuxuu kaa caawinayaa inaad muujiso magaca qoraaga, avatar, door, ciwaanka iimaylka, muuqaallada bulshada, iyo bio gaaban oo hoos yimaada boostada. Waxaad dooran kartaa inaad muujiso/qarin karto nuxurka qoraaga gaarka ah, iyadoo ku xidhan baahiyahaaga. Waxaa intaa dheer, pluginku wuxuu la socdaa widgets kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku darto sanduuqyada qoraaga ee dhinacyada iyo meelaha kale ee widget-ka.
9. Sanduuqa Qoraaga Fanciest
Sanduuqa Qoraaga Fanciest waa sanduuqa sanduuqa qoraaga WordPress ee qaaliga ah kaas oo kaa caawinaya inaad ku siiso aqoonsiga bloggaaga dhowr tillaabo. Alaabta lagu soo bandhigay CodeCanyon, Sanduuqa Qoraaga Fanciest waxaa soo saaray oo dayactiray Slobodan Manic, Dragan Nikolic, iyo kooxdu waxay dhaaftay ThematoSoup.
Sanduuqa Qoraaga Fanciest wuxuu isla markiiba u shaqeeyaa meel ka baxsan sanduuqa. Waxay ku soo rartay dhowr iyo toban astaamood, oo ay ku jiraan profiles bulsheed, kood gaaban, widgets, qoraaga Google, midabada gaarka ah, turjumaada-diyaar, nakhshad jawaab celin ah, culeys-caajis ah, iyo wixii la mid ah. Waa santuuqa qoraaga fantastik ah ee dhammaan isticmaalayaasha, kuwa bilawga ah, iyo faa'iidooyinka si isku mid ah.
10. Qoraaga Molongi
Waxaa kuu keenay Amitzy, horumariye plugin WordPress ah oo qiiro leh oo sumcad leh, Qoraaga Molongui waa qayb dhan oo ka mid ah astaamaha sanduuqa qoraaga. Waxay ku kordhisaa sanduuqa qoraaga WordPress ee aan caadiga ahayn siyaabo cusub oo xiiso leh. Plugin-ku waa qasab in la haysto, gaar ahaan haddii aad jeclaan lahayd inaad ku timi laba qoraa hal boosto.
Qoraaga Molongui waxa uu la socdaa astaamo dheer oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, qorayaal badan, qorayaasha martida, sanduuqa qoraaga oo si buuxda u sifaysan oo loogu talagalay qorayaasha caadiga ah, fariimaha la xidhiidha, avatarrada qoraaga, nakhshad jawaab celin ah, xulasho qaabeyn dabacsan, iyo 70+ shabakadaha bulshada, iyo kuwo kale.
11. Kordhinta Kordhinta
Waxaa sameeyay kooxda ugu fiican ee ThemeInWP, Kordhinta Kordhinta waa wax ka badan kaliya sanduuqa qoraaga WordPress. Waa koox astaamo awood leh oo ku habboon dhammaan baloogyada iyo majalladaha WordPress. Haddii aad raadinayso plugin biobox qoraa, Kordhinta Kordhinta ayaa ku siinaysa taas, ka dibna qaar.
Macluumaad dheeraad ah, Booster Extension plugin waxay la socotaa badhamada wadaagga bulshada oo leh tirinta saamiga, xisaabi oo muuji wakhtiga akhrinta, emojis-celinta, badhamada falcelinta, sanduuqa qoraaga ee profiles bulsheed, iyo wixii la mid ah/ necbahay badhanka boostada. Waxaad u habayn kartaa plugin si ballaaran ilaa aad hoos u dhigto.
Waxaa jira dhowr sanduuq oo qoraaga WordPress ah oo bilaash ah iyo xitaa pluginsyo premium ka yar. Suuqa maaha mid u buuxsama sidaad filayso sababtoo ah sanduuqa qoraagu waa sifo yar. Sidan oo kale, plugins badan ayaan la cusboonaysiin sannado, kuwaas oo si toos ah uga saaray liiskayaga.
Isku soo wada duuboo, sanduuqa qoraagu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hagaajiso ka-qaybgalka boggaaga WordPress ee duuliyaha- auto-pilot. Waxay siinaysaa akhristayaashaada fursad ay kula kulmaan oo ay la falgalaan qorayaashaada, iyo guud ahaan baloogga. Liistada sare waxay ku siinaysaa doorashooyin kugu filan oo aad ku dari karto nooc kasta oo sanduuqa qoraaga ah ee aad rabto.
Waa kuwee sanduuqa qoraaga ee aad ugu jeceshahay WordPress? Nala socodsii faallooyinka!
Ka qaybgal SMX Juun 23-24… bilaash!
11 Samee Naftaada talooyin SEO ah oo Ku Badbaadsada Lacagta